Vaovao - Ahoana no hanafoanan'i Amazon ny baikon'ny mpanjifa tsy voaloa?
Ahoana no hanafoanan'i Amazon ny baikon'ny mpanjifa tsy voaloa?
Ahoana no hanafoanan'ny Amazon FBA ny baikon'ny mpanjifa tsy voaloa? Tamin'ny voalohany dia azo foanana ny kaomandy tsy voahidy avy amin'ny mpanjifa sy ny baiko tsy voaray avy amin'ny mpanjifa. Amin'izay dia hisy fomba manokana hanafoanana ny baiko Amazon eto ambany.
Fomba hanatanterahana ny Amazon FBA hanafoanana ny baikon'ny mpanjifa tsy voaloa:
Hofoanana ny baiko amin'ny fotoana rehetra amin'ny kaomandin'ny mpanjifa amin'ny kaonty>
Amazon FBA any Etazonia dia afaka manafoana ny kaomandy raha mbola tsy voateraka ny baikon'ny mpanjifa, saingy tsy azo foanana aorian'ny fandefasana azy. Ny ankamaroan'ny tranonkala hafa dia tsy afaka manafoana ora vitsivitsy aorian'ny fametrahana baiko. Amin'izao fotoana izao dia tsy te-hanapa-kevitra ny hiverina.
Amazon FBA fanafoanana baiko dia tena tsotra, amin'ny fotoana rehetra amin'ny kaontinao> yourorder, tadiavo ny baikon'ny mpanjifa ilainao hanafoanana, manafoana amin'ny fotoana mety.
Amazon dia manolotra fomba fiverenana telo, dia ny:
1.Fampiasana an-tampony: raha mandefa ny entana any amin'ny teboka serivisy UPS ianao, ny sandan'ny fiverenana dia $ 4.98, izay hesorina amin'ny famerenam-bola;
2.Upspick-up: Raha averinao ny entana noho ny antonyo manokana dia handoa $ 6, izay esorina amin'ny famerenam-bola.
3.Selfrreturning: alefaso any amin'ny paositra amin'ny sarany anao.
Satria mila ny orinasam-pitaterana izahay hanampy anay hamerina amin'ny laoniny ny entana, mila mifandray amin'ny serivisy ho an'ny orinasanao izahay ary manapa-kevitra fa ny orinasam-pitaterana sasany dia manome ny serivisy fiverenana, fa izy ireo kosa mila miantoka ny vidiny.
Avy eo ahoana no fomba hanafoanan'i Amazon ny vokatra efa voaloa?
Nofoanan'ny Amazon ny vokatra efa naloa:
Famerenam-bola ho an'ny fanafoanana: Raha nofoanana ny baiko aorian'ny fandoavam-bola mahomby, i Amazon dia hikarakara ny famerenam-bola ao anatin'ny 1 andro ("Fotoana fanodinana Amazon Refund") aorian'ny fanafoanana ny baikon'ny mpanjifa. Raha toa ka nofoanana ny vokatra sasany, i Amazon dia hanodina ny famerenam-bola ao anatin'ny 1 andro aorian'ny fandefasana am-pahombiazana ireo vokatra sisa. Ny pejy famerenam-bola an-tserasera dia azo jerena ao amin'ny kaontiko>.
Raha mila logistics Amazon FBA misimisy kokoa, mba jereo tsara ny YiXing Global Logistics, www.zim56.com , dia afaka manampy anao amin'ny toerana rehetra toy ny Amazon Address, Business Address & Private Address delivery.